SingForYou.net - Maung Nae Phuu Sar Sone Chin Thalar
Maung Nae Phuu Sar Sone Chin Thalar
Tags : ဝါသနာရှင်များအတွက် ၂
By : SKB on Nov 24, 2009
Score: 160 Rating: 4.85 Comments: 66
Maung Nae Phuu Sar Sone Chin Thalar's Description
ကဲကဲ ရွေးမယ် လျှောက်လွှာနဲ့တစ်ယောက်လိုက်တောင်းလိမ့် မယ် ပေးလိုက်ကြ နာမည် စာရင်း အဲ့ဒီအထဲမှာ ရှိရမဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပေးလိုက်ကြနော် နောက်ကျမှ မပေးလိုက်ရလေခြင်း ဆိုပြီး နောင်တမရကြနဲ့ 
marmar on Aug 8, 2010 0
ကောင်းလိုက်တာနော်မောင်လေး သီးချင်ေ၇ာ အသံလေးေ၇ာ..မောင်လေးနော် အသံတူအောင်ဘယ်လောက်ကျင်ံ့ထားလည်းး) ****'''*********
sweetdream on Apr 17, 2010 0
kal kal .. dar so5star nae arr pay lite mal
snowphyu on Feb 1, 2010 0
a than taw taw kg tal ....5*******
SKB on Feb 20, 2010 0
ဟုတ်လား တော်တော်လေး တော့ မြောက်သွားတယ်ဗျာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောပေးတဲ့အတွက်ပါ ဟီးဟီး
chan2008 on Jan 23, 2010 0
Yeee lite tarrr...... oh my god!!!!!!!!!!!!!!! ကဲကဲ ဘယ်သူလဲဖူးစာရှင်ရပြီလားဗျို့ ... ??? မတင်တော့ပါဘူး အားနားစရာကြီး... brother SKB က ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလောက်ပြီ (အဖွားကြီးများ).... ကံကောင်းပါစေဗျာ...
ဟီးဟီး ဖူးစာရှင်က လည်း အစောကြီးကတည်းကရှိပြီးသာပါနော့ ဟွန်းးးးးးးးးးး ၀ိုင်းဝိုင်းတော့ မလည်ပါဘူး တစ်ယောက်တည်းရှိတာပါ နော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
forevermoe on Nov 28, 2009 0
thar nge yayyy..haha kyar htae mhar lae par tay tal..sa kar lay ka lae pyaw tay ...mite tal kwarr ma moe tot form ma u tot buu nor..:P bravoooooooooooooooo..arr pay twer par tal shinnnt...******************
SKB on Nov 28, 2009 0
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ အားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
paradise on Nov 27, 2009 0
hummmmmmSKB ka lat mat ka lal sing kaing thay tal taw...eeeeee...kyote taw form ma ya lite buu taw...ko SKB yay..applicaiton from ko..register ne' po..lite naw..address..ka....... ********&&&&&&&&&&&&&&$$$$$$$$:))
SKB on Nov 27, 2009 0
အိုကေအိုကေ မြန်မာနိုင်ငံက ကောင်မလေး လက်မှတ်တွေ အကုန်ယူသွားလို့ သူ့ စီကနေရရင် ပို့လိုက်မယ်နော့ ဟဲဟဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
maryaung on Nov 27, 2009 0
amal lay.. ther ngae yay.. ngar ka arr pay pho lar tar.. ....taw p...lit tot mal...hek hek hek...
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်မရေ အားလုံးအစင်ပြေပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်
kabar on Nov 25, 2009 0
wow. very nice song arr pay thwer nar thaung nay tel.******for u.
SKB on Nov 25, 2009 0
Phyogyi on Nov 25, 2009 0
အတွေ့ အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်လို့ တော့ ..မထည့်မိစေနဲ့နော်....bro..SKB..ရေ..:P:P:P:P:P:P.......နောက်တာပါဗျာ. ဆိုထားတာကလည်း..တကယ်ကို ဘယ်လိုစကားနဲ ချီးကျူးရ မလဲ..မသိတော့ ပါဘူးဗျာ.....5*****...နဲ့ အတူ... လျှောက် လွှာလာတင်တဲ့ အထဲက...အချောဆုံးတစ်ယောက်နဲ့...ဖူးစာဆုံနိုင်ပါစေဗျာ..........:))))))))))))))))))))))))))))))နားထောင်အားပေးလျက်............................Phyogyi....
လျှောက်လွာကုန်ကာနီးဖြစ်ပေါ့ .... ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ , အိမ်သူပီသမှု ရှိမရှိကိုတော့ မစိမ်းက ၀ိုင်းပြီးရွှေးချယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် :P
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ ကိုဖြိုးကြီး ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ
tharnge123 on Nov 25, 2009 0
Very good to listen bro.**************
whitekisslay on Nov 25, 2009 0
Ko SkB...toe...lat ma le bu pot dar so...sayin lite kaunt nay pe so taw:P...ako yay narr htaung lol kaung tal....**************kyite twer p ako so lite mha...:)
inn hote tal lat ko m lal bu phyit nay tal choice pay par oo haha :D
YinLiHoe on Nov 25, 2009 0
OMG ... Kyun Daw Toe Lel ... Apply Loke Ya Mar Lar????? Ha Haa Haaaaa As Ko AyePaw Said .. This song Makes me really funny..WarHaHaa Yi Like Ya .... HaHaa Haaaaaaa So funny .. OMG.. Bike Tg Nar Tel.. Ko SKB Yay.. Kg Lel Kg Ma Kg ... Htin Paw Ta Yoke Soung Htar Tar Lel Kg Ma Kg .. Sat Ma Yeee Naing Taut Loe.. Bye Bye.. See You later
arr ae lo tot par bu lay haha ako lae apply loat chin loz lar loat chin yin lae loat lite lay sin sar pay mhar pop haha
sumaylay on Nov 25, 2009 0
kyaw nyar ka tot..ma par ma nay ya...amyal par nay tar pal naw...:D...fu sar shin ka shi p thar ko bar lo htat yway nay tar lal...:D...d tha chin lay ayan good tal bro...bro vocal nae taw taw lite tal...*****
ကြော်ငြာတာဟုတ်ပါဘူးဗျာ ချစ်လွန်းလို့ပါ ရင်ထဲက စကားတွေက အန်ထွက်ထွက်လာတာလေ ဟီးဟီး
yizaw on Nov 25, 2009 0
shout lwar kyan tay lar byoooooooo just kidding so match ur vocal
ကျန်သေးတယ်ဗျို့ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်း အများကြီးယူသွားလို့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က လေ သူ့ စီမှာများရှိအုံးမလား မသိဘူး ဟီးဟီး အဲဒီကောင်မလေးက မြန်မာမှာ ကျောင်းတက်နေတာလေ မာစတာကွန်ပျူတာက ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက် ပါ
ayepaw on Nov 25, 2009 0
Hahahaaa... I love this song bro. THIS IS AWESOME. MADE ME LAUGH REALLY HARD. I loved the way you sang this. ******** x100 Classic thachin so bho thin pay bar lar byar.
အင်း သင်ပေးမယ် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဆိုချင်လဲ ဟီးဟီး
mayangel on Nov 25, 2009 0
Real fun to listen to your song.aso kaung yon ma ka buu sense of humor lae kaung tel... ta kel yi ya tae.. like it ******************
brownlay on Nov 24, 2009 0
I was thinking of saying the same thing as what ma PP01 said.. Well you asked her permission first before singing this song!!! Taw lite taet SKB.. really fun to listen to this .... Sa Gar Pyaw Lay lae` kyite tel ha ha *****************
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ သားငယ် သီချင်းတိုင်းနီးပါး အားပေးတဲ့ အတွက် အစ်မအတွက် သီချင်း တစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ဆိုပေးအုံးမယ်
punttatkaya on Nov 24, 2009 0
mite E ko SKB...arr pay twr tel...
aungtun1 on Nov 24, 2009 0
bro SKB... nice song....aso ka lal kaung mha kaung par,,,,,****************for you,brother :)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်ထွန်းရေ အမြဲအားပေးတဲ့ ကိုအောင်ထွန်း ကို အားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
achitsonethu on Nov 24, 2009 0
ဟင်း ကြောက်စရာကြီး ဇာတ်သံနဲ့ကိုကြီးရယ်နေပါတော့ ဆုံချင်တော့ဘူး တော်ကြာ ထင်ပေါ်လို့ ကပ်စေးနှဲဘယ်လိုလုပ်မလည်း အဟိ ဆိုထားတာ တကယ်တူတယ် အဟီး ဒန်...ဒန်...
မကြောပါနဲ့ ခြူးခြူးရယ် အဲဒါ ကပ်စေးနည်းတာ မဟုတ်ဘူးလေ စေ့စပ်တာပါ မိဘလိုသဘောထားမဲ့ အချက်လည်းပါသေးတယ်နော် ဒီခေတ်ထဲမှာ အဲလို လူရှိသလားလို့ လိုက်ရှာကြည့်ပါအုံး ဟီးဟီး
thant on Nov 24, 2009 0
song so poet taung.......phone sat pye khwint taungg ya tal........akhu htal ka kyauk nay ya tal.........thanarr tal mg SKB yay...........sa tar par........so htar tar takal pro par bal..........********
SKB on Nov 24, 2009 0
ဟားဟား ကြောက်တာဟုတ်ဘူးဗျ ချစ်တာ ဟွန်းးးးးးးးး
yellownavy on Nov 24, 2009 0
First off, I don't understand who gave less than 5* on this song sung with perfection. This is another great performance by you Ko SKB. Not only the music is entertaining but also the writing is very humourous. I enjoyed every single component pertaining to this song. I think that you are more than ready to release an album of 'တမ်းတမိသောတွံ့တေးသီချင်းများ by SKB'. :D 5*
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန့်မန့် ဖတ်၇တာ အရမ်းပျော်တယ်
pp01 on Nov 24, 2009 0
Hae.. bar twey thit sar phauk phot kyan ywel nay lae.. your chit chit lay nae taing pyaw mal nawt::D hinn hinn..tha ti htar nawt:******************I like this song so much.. and really fun to sing..
panshwe on Nov 24, 2009 0
မှားပါတယ် ပြောမိတာ .. ဟားဟား ..
ဟီးဟီး သစ္စာမဖေါက်ပါဘူး ချစ်သူလေးကို ပြောပြီးဆိုထားတာပါ သူ ကသီချင်းပဲဆိုတာပဲတဲ့ ရပါတယ်တဲ့ ဟဲဟဲ သားငယ် ချစ်သူ က သဘောထားမသေးသိမ်ပါဘူးနော့် ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ ကို ခွင့်တောင်းထားတာနော် သူ့ ကို တိုင်လည်း အစ်မပဲမောမှာ ဟဟ ရှက်ကရော့ရှက်ကရော့
sch7677009 on Nov 24, 2009 0
classical htway bae cha lar chi lar...kaung tal byo...
အင်း ဒီသီချင်းတွေ ပဲဆိုတတ်တယ်လေ ဟီးဟီး ကျေးဇူးနော်
maureen on Nov 24, 2009 0
so nice to listen bro..arr pay nay per tal shin.....************** for u..
ဟီးဟီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေ ကွန့် မန့် ကလည်း နည်းလိုက်တာ များများရေးလေ ညီမလေးရ
Maung_Than on Nov 24, 2009 0
wow very nice ko SKB yay...******
myautmuulal on Nov 24, 2009 0
ha ha ,,,wow great and u write it down the funny description :P nice vocal ************
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ စပါယ်ရှယ်နော် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
kthetkawmu on Nov 24, 2009 0
ohhhhh... aso kg la kyi lar...aso lae taw2 ping tal kwar...mite tal*************
greenlay on Nov 24, 2009 0
အဆိုပိုင်တဲ့ အဆိုတော်ကြီးရေ ... စတားတွေပေးချင်လို့ပါ ******************************** ၊ မစ်ိမ်းရဲ့ သူငယ်ချင်းကြီး " ယဉ်ကျေး , လိမ္မာ , အိမ်သူပီသတဲ့ " ဇနီးလှလေးရအောင် .... လျှောက်လွာရောင်းပေး ရင်း ကူညီအုံးမှာနော် :) :P
အင်း ဂယ်ကြောတာလား မစိမ်း ဒါဆို ကူညီပေးပါအုံး ဟီးဟီး
kounghtetsan on Nov 24, 2009 0
ဟီးဟီး.. အသံလေးနဲ့.. နောက်က သရုပ်ဆောင်လေးနဲ့. အရမ်းလိုက်တယ်သိလား..ခစ်ခစ်.. ကောင်းတယ်ကွာ.. သူငယ်ချင်းရေ.. အားပေးသွားပါတယ်..5******** ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
အင်းးးးးးးးးးး ကျေးဇူး ကိုဖိုးကောင်းရေ
raindrops on Nov 24, 2009 0
^ v ^ ... haha ... nga. ma lay ka good tal kwar ... I love it soooooo much ... oh my dear ... cool ... mg lay ka vocal tin kg tar hote woo ... voice nae lae tha yote saung tat tal ... that's so lovely ... thi lar ... hay ... shout lwar tway myar gyi ya yin mama ka lae pay phat oo naw ... mama lae wine sin sar pay mal mg lay twet ... k ? love this song ... love ur vocal ...wowowowowo... damn great ! ... *****5stars4u ... toe mg lay ko bu thu ka3stars pay twar lae ... nout ae lo lote yin ...lwal by toe nae ... kyar lar ...heheh ... mg lay ... study lote tot ... war tha nar par tar lae lote ... kyaung sar lae special kyoe sar yinn ... shout lwar tway myae gyi ya par say kwar ... ^ v ^
၀ိုးးးးးးးးးးးးးး အားကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အစ်မရေ ကွန့် မန့် ဖတ်ရတာ အ၇မ်းပျော်တယ်အစ်မရာ စပါယ်ရှယ်ကျေးဇူးတင်တယ်
internetkoko on Nov 24, 2009 0
so good pae
ကျေးဇူးကွာ အဆိုတော် အသစ်လေးပါလား ကွယ် ကြိုဆိုပါတယ်သူငယ်ချင်းရေ
zanzay on Nov 24, 2009 0
ဖရန့် ရေ အသံနဲ့ သီချင်းလည်းလိုက်တယ် အဆိုလည်းပိုင်တယ် အားပေးသွားတယ် ဖရန့် ရေ